Midkoodna daalacayaasha ugu isticmaalka badan, oo ay kujiraan Safari, ma qaadan doonaan badalka buskudka Google ee loo yaqaan FloC | Waxaan ka socdaa mac
Midkoodna daalacayaasha ugu isticmaalka badan, oo ay ku jiraan Safari, ma qaadan doonaan beddelka buskudka Google ee loo yaqaan 'FloC'
Kuwo badan ayaa adeegsadayaasha ah oo wax yar ka sarreeya sanka inay dib u eegaan oggolaanshaha ay codsadeen bogagga shabakadda ee aan booqanno si aan u siino ama u oggolaanno oggolaanshaheenna in lala socdo. Qaar badan ayaa ah xalka laga heli karo suuqa xannib fariimaha noocan ah, markaa iyagu waxtar ma leh hadda.
Beddelka Google ee loo yaqaan 'cookies' waxaa loo yaqaan 'FLoC', oo ah tiknoolajiyad si fiican looma helin gabi ahaanba cidna, tan iyo markii ay u arkeen inay tahay dhibaato qarsoodi ah oo ka badan xalka, sidaa darteed tiknoolajiyad ma leh ujeedo ah inay ku bixiso taageero iyaga, oo ay ku jiraan Apple.
Toddobaadkii hore WorPress wuxuu ku dhawaaqay usbuucii la soo dhaafay inuu si otomaatig ah u joojin doono Google FloC dhammaan boggaga internetka ee ay abuureen nidaamkooda maareynta maareynta, mid ka mid ah kuwa ugu badan ee laga isticmaalo internetka oo dhan. Marka lagu daro WordPress, waxay dhawaan ku biireen Microsoft oo leh Edge Chromium, Mozilla Firefox, Opera, iyo xitaa DuckDuckGo.
Shirkadahan badankood waxay ku sifeeyaan Google FLoC duulaan qarsoodi ah, in kastoo tiknoolajiyaddan si sax ah loogu talagalay in looga hortago. Tiknoolajiyaddan cusub, sida ku cad waxa ay ka leeyihiin Google waxay noqon doontaa mid aad u ammaan badan oo gaar ah si loola socdo isticmaalayaasha, maaddaama ay sidaas ku sameyso heer kooxeed oo aan si gaar ah u lahayn si ay u hagto xayeysiinta ku saleysan xogta la ururiyey.
Qoraallada Verge ee Microsoft, shirkaddu waxay saxiixday:
Waxaan aaminsanahay mustaqbal meesha uu webku ku siin karo dadka asturnaan, daahfurnaan iyo xakameyn, iyadoo la taageerayo tusaalooyinka ganacsiga ee mas'uulka ka ah si loo abuuro jawi firfircoon, furan oo kala duwan.
Sida Google oo kale, waxaan taageernaa xalalka siiya isticmaaleyaasha ogolaansho cad oo aan ka weecinayn xulashada macaamiisha. Taasi waa sababta aan sidoo kale u taageerin xalalka ka faa'iideysanaya astaamaha aqoonsiga isticmaalaha ee aan la oggolaan, sida faraha.
Warshaduhu way socotaa waxaana jiri doona soo jeedin ku saleysan biraawsar oo aan u baahnayn aqoonsi shaqsi shaqsiyeed iyo soo-jeedin aqoonsi ku saleysan oo ku saleysan ogolaanshaha iyo xiriirka koowaad.
Laga soo bilaabo Mozilla, waxay sheeganayaan inay yihiin barashada soo-jeedinta xayeysiinta si loo ilaaliyo asturnaanta, oo ay ku jiraan FLoC, laakiin xilligan, ma qorsheynayaan inay ku taageeraan tikniyoolajiyadan Firefox.
Ma rumaysanayno fikirka ah in warshaddu u baahan tahay balaayiin xog ah oo ku saabsan dadka, la ururiyey lana wadaagay iyagoon aqoon u lahayn, si ay u gudbiyaan xayeysiis la xiriira.
Taasi waa sababta aan ugu hirgelinay Badbaadinta Raadinta Kobcinta si aan u xakameyno in ka badan toban bilyan oo trackers maalin kasta, waxaanan sii wadnaa ikhtiraacidda habab cusub oo lagu ilaalinayo dadka isticmaala Firefox.
Xayeysiinta iyo asturnaanta ayaa wada noolaan kara. Iyo warshadaha xayeysiinta waxay u shaqeyn karaan si ka duwan sidii ay u shaqeyn jireen sanadihii hore. Waxaan rajeyneynaa inaan door ka ciyaarno raadinta xalalka dhisaya shabakad wanaagsan.
In kasta oo Apple aysan uga hadlin arrinta qoraal rasmi ah, mowqifkaaga FLoC Waxaa cadeeyay John Wilander, Injineerka WebKit ee Apple, isaga oo amaanay go'aanka biraawsarka geesinimada leh ee ah in uusan taageero u fidinaynin Google beddelka cookies-ka.
In kasta oo Google ku gacan sarrayso suuqa biraawsarka kumbuyuutarka gacan bir ah, ma hirgelin karo beddelka buskudka keli keli ahaan haddii daalacayaasha intiisa kale ee suuqa aysan bixin doonin taageero.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Midkoodna daalacayaasha ugu isticmaalka badan, oo ay ku jiraan Safari, ma qaadan doonaan beddelka buskudka Google ee loo yaqaan 'FloC'
Ojito. Markaa haddii ay hore u go’aansadeen, laakiin aaney hirgelin karin tikniyoolajiyaddaas, maxaa ku dhici doona dhammaantood?
Dukaanka khadka tooska ah ee Apple wuu xidhan yahay, muftaaxa wuu dhow yahay
"Hada iyo Kadib" wuxuu noqon doonaa taxanihii ugu horeeyay ee shirkad Isbaanish ah oo soo saarta Apple TV +